MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward MPT Viu Pack FAQs MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT Viu Pack
၁။ Viu ဆိုတာဘာလဲ။
Viu ဆိုတာ ရုပ်ရှင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာ ထိပ်တန်းရောက်နေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ အာရှနိုင်ငံ (၅)နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း၊ ဂျပန်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ထောင်နဲ့ချီ ရုပ်ရှင်တွေ၊ တီဗီရှိုးအစီအစဉ်တွေကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ အပြည့်အဝကြည့်ရှုနိုင်မယ့်ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၂။ Viu app ကို ဘယ်လိုဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့ရနိုင်မလဲ။
Viu app ကို Google Play Store (သို့) https://www.viu.com/ott/web/mm/viu.apk တွင်လည်း ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
၃။ Viu Pack ကဘာလဲ။
တန်ဖိုး ၅၄၉ ကျပ်
ရရှိနိုင်မည့် Data ပမာဏ 550 MB
အထူးအစီအစဉ် ထောင်ပေါင်းများစွာသောရုပ်ရှင်များနှင့် TV အစီအစဉ်များကို ၂၄ နာရီ ငှားရမ်းခ အခမဲ့ဖြင့် Viu အထူးကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်
သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက် Code ဖြည့်သွင်းပြီးချိန်မှ၂၄ နာရီ
၄. Viu မှာ ဗီဒီယိုတွေကြည့်ဖို့ ပိုက်ဆံပေးရမှာလား။
Viu app မှာ Viu Pack ဝယ်ယူလိုက်ပြီးတာနဲ့ Code နံပါတ် တစ်ခုကို ရရှိမှာပါ။ အဲ့ဒီ Code ကို ရိုက်ထည့်ပြီးတာနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ရှိုးအစီအစဉ်တွေ၊ ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးကို အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူထားတဲ့ ဒီဒေတာပက်ကေ့ချ်မှ 550 MB ကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီး 1MB ကို တစ်ကျပ်သာ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ထားတဲ့ 550 MB ဒေတာကုန်သွားပြီးနောက် ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ ဒေတာပက်ကေ့ချ်အတိုင်း (သို့မဟုတ်) သုံးသလောက်ပေးဒေတာနှုန်းထားနဲ့ ဆက်လက် ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၅. ဗီဒီယိုတွေကို အရေအတွက် အကန့်အသတ်နဲ့ ကြည့်ရှုရမှာလား။
ကြည့်ရှုရမယ့် ဗီဒီယိုအရေအတွက်ကို ကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ဝယ်ယူထားသော ဒီဒေတာပက်ကေ့ချ်မှ Viu အတွက် 550 MB ကို သက်တမ်း၂၄နာရီအတွင်း စိတ်ကြိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။ ဝယ်ယူထားတဲ့ ဒေတာပမာဏကုန်သွားပြီးနောက် ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဒေတာပက်ကေ့ချ်အတိုင်း (သို့မဟုတ်) သုံးသလောက်ပေးဒေတာနှုန်းထားအတိုင်း ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပက်ကေ့ချ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် နောက်ထပ်ဒေတာပက်ကေ့ချ်တစ်ခုကို အလွယ်တကူထပ်မံဝယ်ယူပြီး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဗီဒီယိုတွေကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၆။ဒီဒေတာပက်ကေ့ချ်က တစ်ခြားနေရာတွေမှာ (ဥပမာ Facebook သုံးတာ၊ Youtube ကြည့်တာတွေမှာ) သုံးလို့ရမလား။
မရပါဘူး။ Data bundles က Viu အတွက် သီးသန့်ပါ။ Viu မဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားအရာတွေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒါတွေအတွက် ဝယ်ယူထားတဲ့ ဒေတာပက်ကေ့ချ်တွေ (သို့မဟုတ်) သုံးသလောက်ပေးဒေတာနှုန်းထားနဲ့ ဖြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၇. ရရှိထားတဲ့ Code ကို လဲလှယ်တဲ့အခါမှာ ပြဿနာတက်နေပါတယ်။ ဘာလုပ်ရပါမလဲ။
Viu app ထဲကို ဝင်ပြီး ရရှိထားတဲ့ Code ကို လဲလှယ်ပါ။ အကယ်၍ သိပ်ပြီးမရှင်းလင်းဘူးဆိုရင် နမူနာ လုပ်ပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုကို Viu app ထဲမှာဝင်ကြည့်ပြီး Code နံပါတ်ဘယ်လိုထည့်သွင်းအသုံးပြုရမလဲ သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် MPT နဲ့ Viu ရဲ့ Support ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
• Data quota နဲ့ပတ်သက်၍ဖြစ်စေ၊ ပေးပို့လိုက်တဲ့ Code နံပါတ်နဲ့ဖြစ်စေ အဆင်မပြေတာ တစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ရင် MPT ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ၁၀၆ ကိုခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
• Viu App နဲ့ပတ်သတ်၍ဖြစ်စေ၊ Code နံပါတ်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ အဆင်မပြေမှုများ ရှိခဲ့ရင် Viu ကိုအောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
o help.viu@vuclip.com ကို အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
o ဖုန်းနံပါတ် 09969900000 ကို တနင်္လာမှ သောကြာနေ့အထိ နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီ (ရုံးချိန်အတွင်း) ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
၈။ Viu ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရန် အကောင့်တစ်ခုရှိဖို့လိုသလား။
အကောင့်ဖွင့်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ MPT ကွန်ရက်ကနေ Viu အတွက် ဒေတာပက်ကေ့ချ်ကို ဝယ်ယူပြီးတာနဲ့ Code နံပါတ်တစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပြီး ဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်နိုင်ပါပြီ။ အဲ့ဒါကြောင့် အကောင့်တစ်ခု ထပ်ဖွင့်ဖို့လိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၉. Viu နဲ့ Viu ပရီမီယမ်က ဘာကွာလဲ။
သာမန် Viu က အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုတော့ ပေးထားပေမယ့် ဗီဒီယိုတွေကြည့်နိုင်ဖို့ကိုတော့ အကန့် အသတ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပရီမီယမ်ကြည့်ရှုခွင့်ကတော့ ရရှိထားတဲ့ Code လဲလှယ်ပြီးနောက် ၂၄နာရီအတွင်း Viu မှာ ရှိနေတဲ့ ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံး ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၀. Viu ဒေတာ 550 MB က ကုန်သွားလို့ Viu က ဗီဒီယိုတွေကို ဆက်ကြည့်လို့ရဦးမလား။
ဟုတ်ကဲ့။ ရရှိထားတဲ့ကုတ်နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး ဒေတာမကုန်မချင်း ၂၄ နာရီအတွင်း ဗီဒီယိုတွေကို ဆက် တိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူထားတဲ့ Viu ဒေတာပမာဏ ကုန်သွားပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဒေတာ ပက်ကေ့ချ်အတိုင်း (သို့မဟုတ်) သုံးသလောက်ပေးဒေတာနှုန်းထားအတိုင်း ကျသင့်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၁. MPT ရဲ့ Viu Pack ဖြင့် ပရီမီယမ်ဗီဒီယိုတွေကို ဒေါင်းလုတ်ချနေပါတယ်။ သက်တမ်းကုန်သွားပြီး အဲ့ဗီဒီယိုကို ဆက်ဒေါင်းလို့မရတော့ပါဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
Viu ရဲ့ ပရီမီယမ်ဗီဒီယိုတွေက Viu ရဲ့ ပရီမီယမ်သုံးစွဲသူတွေ တစ်နည်းအားဖြင့် MPT Viu Pack သုံးတဲ့သူတွေပဲ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Viu ဒေတာပက်ကေ့ချ်ကို နောက်ထပ်အလွယ် တကူထပ်မံဝယ်ယူလိုက်တာနဲ့ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်လက်စ ဗီဒီယိုတွေကို ဆက်လက်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၂. Viu ပရီမီယမ်ကြည့်ရှုခွင့်ရယူဖို့ MPT ကွန်ယက်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါသလား။
လိုအပ်ပါတယ်။ Viu ပရီမီယမ်ကြည့်ရှုခွင့်ရယူဖို့ MPT ကွန်ယက်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၁၃. Viu Pack ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ အကြိမ်အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားတာရှိပါသလား။
မရှိပါ။ Viu Pack ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ အကြိမ်အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားတာမရှိပါ။
၁၄. အကယ်၍ Viu ဒေတာပက်ကေ့ချ်မှာ မသုံးလိုက်ရတဲ့ ဒေတာတွေကျန်နေပါတယ်။ နောက်ထပ် ပက်ကေ့ချ်ထပ်မံဝယ်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ ဒေတာတွေသယ်သွားလို့ရမှာလား။
၁၅. Viu Pack အတွက် ၂၄နာရီသက်တမ်း ကို ဘယ်လိုစတင်သတ်မှတ်မှာလဲ။
ဒေတာပက်ကေ့ချ် စတင်ဝယ်ယူချိန်မှစတင်၍ ၂၄ နာရီသက်တမ်းကို စတင်သတ်မှတ်ပါတယ်။ Viu ပရီမီယမ်ကြည့်ရှုခွင့်အတွက် သက်တမ်းမှာ Viu app တွင် ရရှိထားသော Code လဲလှယ်ချိန်မှ စတင်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူထားတဲ့ ဒေတာပက်ကေ့ချ်သက်တမ်းက Viu ပရီမီယမ်ကြည့်ရှုခွင့်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးခင် ကုန်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဒေတာပက်ကေ့ချ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် Viu ပရီမီယမ်ကြည့်ရှုခွင့်ဖြင့် ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (ဒေတာအတွက် ဝယ်ယူထားသော ဒေတာ Pack (သို့) သုံးသလောက်ပေးဒေတာနှုန်းထားနဲ့ ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်)
၁၆. Viu ပရီမီယမ်ကြည့်ရှုခွင့် Code လဲလှယ်ခွင့်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးရက်ရှိပါသလား။
ရှိပါတယ်။ ဒေတာပက်ကေ့ချ် ဝယ်ယူရာမှရရှိထားသော Viu ပရီမီယမ်ကြည့်ရှုခွင့် Code လဲလှယ်ခွင့်သက်တမ်းမှာ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ (၃၁) အထိဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းကာလနောက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါ Code များအသုံးပြုပြီး လဲလှယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၁၇. သုံးစွဲနိုင်သည့် ဒေတာပမာဏ ကုန်ဆုံးကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
သုံးစွဲနိုင်သည့် ဒေတာပမာဏ ကုန်ဆုံးသွားကြောင်း SMS ပေးပို့၍ အကြောင်းကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။